Budata Chernobylite maka Windows
Chernobylite bụ egwuregwu egwuregwu egwu egwu rpg dị egwu sci-fi. Chọgharịa akụkọ na-enweghị ahịrị nọchịchọ gị ikpughere eziokwu nke oge iru uju gị na hyper-real, 3D nyocha nke ala Chernobyls Exclusion Zone.
Chernobylite bụ egwuregwu egwuregwu ndụ lanarị sci-fi sitere naka ndị mmepe nke Farm 51. Nịm na ezigbo ihe efu, 3D nyocha nke mpaghara Chernobyl machibidoro iwu, ị na-ewere ọrụ nke Igor, physicist na onye bụbu onye ọrụ Chernobyl Power Plant. Ịlaghachi na Pripyat iji nyochaa ihe omimi dị omimi nke onye ị chọrọ ịlụ afọ 30 gara aga. Nọchịchọ gị ikpughere eziokwu, ị ga -alụ ọgụ megide ndị agha na -emegide mmadụ, ndị na -eso ụzọ ndị ọzọ na ihe okike karịrị ike mmadụ, yana ọnọdụ obi ọjọọ na enweghị obi ebere.
Jikere maka njem na -atọ ụtọ nke nlanarị, izu ọjọọ, ụjọ, ịhụnanya na ịhụ nanya. Ị nwere ike ịkwụsị ụjọ gị?
Ntọala Ntọala na Mmepụta - Guzobe ntọala iji hazie ọrụ na njem gị kwa ụbọchị. Jiri ebe gị rụọ ngwa, ọnyà na ngwa ọgụ, ma ọ bụ gbanwee akụrụngwa gị dị ka ọ dabara na mkpa gị.
Njikwa akụ na njikwa otu - Ndị enyi dị mkpa maka nlanarị gị na njem gị. Kwa ụbọchị chọrọ nhazi nke ọma na ikenye akụrụngwa yana ọrụ ị na -ekenye ndị enyi gị.
Izu ohi, nlanarị na esemokwu - nlanarị na mpaghara adịghị mfe, yana nsogbu ọhụrụ na -apụta kwa ụbọchị ka ndị enyi na -anwụ ma akụrụngwa agwụ. Zere ikpughe na mwakpo stealth ma ọ bụ tinye aka na mgbọ egbe. Ihe egwu na -ezo nakụkụ niile.
Akụkọ na usoro nke enweghị ahịrị - Ọ nweghị ụzọ egwuregwu abụọ yiri. Akụkọ ahụ dị naka gị, yana nhọrọ gị. Họrọ nke ọma ma ị ga -atụkwasị ndị enyi gị obi, jiri akụ maka nlanarị ma ọ bụ nyocha, wee chee ma ọ bụ zere esemokwu. Ọdịnihu dị gị naka.
Mmepụta: The Farm 51